PIN nchebe ọhụrụ nke ama nwere ndị na-emebi iwu | Gam akporosis
General bugging site na ọhụrụ PIN nche protocol na Signal
Ihe mgbaàmà natara a nnukwu ogwu ogbunigwe na nso nso a na ọnwa ole na ole gara aga anyị na-ahụ mmegharị ndị ọzọ na mmelite ọhụrụ. A nabataghị otu n'ime akwụkwọ akụkọ ọhụrụ ahụ ma enwere ya a n'ozuzu iwe n'ihi na PIN nche protocol.
Sistemụ PIN ọhụụ na-amanye ndị ọrụ ịmepụta otu ma tinye ya ọtụtụ oge maka ebumnuche nke ịchekwa profaịlụ gị ezoro ezo, kọntaktị na ntọala na igwe ojii. N'ezie, ha emeela ihe ngosi na-egosi mkpesa ha maka mgbaàmà iji gaa.
The nchegbu na-abịa n'ihi na Ihe mgbaàmà akọwaghị nke ọma ojiji na ebumnuche nke PIN ahụ nke nwere ebumnuche nke idobe data ahụ na igwe ojii. Nke ahụ bụ, ngwa ahụ anaghị aga nkọwa ọ bụla metụtara ojiji nke PIN ọhụrụ a iji buru data ahụ.
Maka anyị ịghọta, a naghị eji PIN a iji nweta ngwa ahụ. Ejirila ojiji abuo kee ya. Otu n'ime ha bụ nhọrọ na a na-eji ya ka ọ bụrụ na mmadụ enweta nọmba ekwentị gị ma gbalịa ịdebanye aha ya site na mgbaàmà, a ga-egbochi ya maka ụbọchị 7 na-enweghị PIN.
Ojiji nke abuo dika akwa nchekwa nke abụọ maka data echekwara na sava mgbaama. Anyị amaworị na ha na-eji nzuzo na nchebe nke data onye ọrụ kpọrọ ihe nke ukwuu. Iji nye ihe atụ nke ojiji nke abụọ a. Ugbu a ọ bụrụ na ị na-eji ngwa desktọọpụ ma ị gaa ụbọchị ole na ole na-enweghị ịlele ozi ọhụrụ, ọ nwere ike iwe nkeji ole na ole ka ọ mekọrịta iji gosi ndị ọhụrụ. N'ihi PIN a, enwere ike igosipụta ya n'egbughị oge na nkeji.
Dịka otu onye ọrụ mgbaàmà si ekwu, nsogbu ahụ dịkarịrị n'ịkpọ koodu a dị ka PIN na nke ahụ na-agbagha ndị ọrụ. Anyị ga-ahụ ma mgbaàmà bidoro nkwupụta ma ọ bụ chọọ ụzọ iji meziwanye ihe omuma ohuru a iji tinye nchebe na ngwa izipu ozi a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » General bugging site na ọhụrụ PIN nche protocol na Signal
Tụgharịa TV na ekwentị site na Chromecast
HMD Global emechaala wepụta gam akporo 10 maka Nokia 3.1 Plus